Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Trixide Sulfite sy Sulfur | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Trixide Sulfite sy Sulfur | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Home / Science & Nature / Science / Simia / Inorganic Simia / Inona no maha samy hafa Sulfite sy solifara Trioxide
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny trioxide solifara sy solifara dia ny solifara dia fitambaran'ny iôna manana ny iôlôma (IV) anion raha ny trioxide solifara kosa dia fitambarana tsy ionika.
Sulifita sy solifara trioxide dia fitambarana simika misy atôma solifara . Ny teny hoe sulfites dia manondro fitambarana ionic izay misy anion solifita mifamatotra amin'ny kation isan-karazany. Sulfur trioxide dia fitambarana tsy miharo fananana manana ny formula simika SO3.
2. Inona ny Sulfite
3. Inona no atao hoe Trioxide solifara
4. Sulfite vs Sulfur Trioxide amin'ny endrika Tabular
5. Famintinana - Sulfite vs Sulfur Trioxide
Inona ny Sulfite?
Ny teny hoe sulfites dia manondro fitambarana ionic izay misy anion solifita mifamatotra amin'ny kation isan-karazany. Ny raika simika an'ny anion solifara dia SO 3 2- . Izy io koa dia antsoina hoe ion sulfate (IV) izay misy ny atôma solifara ao amin'ny anion manana fanjakana ôksidasioma +4. Ny anion solifôna dia ny fotony mifangaro amin'ny bisulfite. Matetika ny tsiranoka solifita dia miseho amin'ny sakafo sasany ary koa ao anatin'ny vatan'olombelona. Ankoatr'izay, ny solifita dia ilaina amin'ny fametahana sakafo ary afaka mamorona vongan-tany rehefa miaraka amina sulfur dioksida amin'ny sakafo izy ireo.
Sary 01: firafitry ny Anion Sulfite
Misy firafitra resonance telo azo atao ho an'ny anion solifara. Isaky ny firafitra resonazy dia azontsika atao ny mandinika fa ny atôma solifara dia mifamatotra indroa amin'ny iray amin'ireo atôma ôksizenina telo. Noho izany, ny firafitry ny resonans tsirairay dia misy fehin-kibo solifara hatramin'ny okrazy miaraka amina fiampangana aotra, raha ny atôma solifara kosa mifamatotra amin'ireo atôniôma oksizenina roa hafa amin'ny alàlan'ny fatorana tokana. Ireo atôma ôksizenina roa hafa noho izany dia mitondra fiampangana ara-dalàna ny -1 amin'ny atoma ôksizenina tsirairay. Ireo fiampangana ara-dalàna ireo dia mandray anjara amin'ny fiampangana ankapobeny (-2) an'ny anion solifara. Misy mpivady elektronika tokana amin'ny atoma solifara. Noho izany, ny geometry an'io anion io dia pyramidal trigonal.
Inona ny Sulfur Trioxide?
Sulphur trioxide dia fitambarana tsy miharo fananana izay manana formule simika SO3. Izy io no heverina ho fitambaran'ny solifara oksida manan-danja indrindra. Ity akora ity dia mety misy amin'ny endrika maro: amin'ny fanjakan'ny entona, ny fanjakana matevina vita amin'ny krystaly, ary ny polymer solid. Na izany aza, azo zahana ara-barotra indrindra izy io ho toy ny vatosoa kristaly fotsy tsy misy loko ary afaka mandoto amin'ny rivotra. Ny fofon'ity fitambarana ity dia mety miovaova, fa mamorona etona manaitra kosa.
Azontsika atao ny mandinika firafitra resonance telo an'ny kompraxide solifara solifara. Noho izany, ny tena molekiola dia firafitra hybrid amin'ireo firafitra resonans telo ireo. Ny firafitra hybrid dia manana geometry planar trigonal. Eto, ny atoma solifara dia eo afovoan'ny molekiola, ary manana fifehezana oksizenina +6. Ny fiampangana ofisialy ny atoma solifara dia aotra. Ny firafitry ny resonans dia manondro fa ny fatorana solifara telo ho an'ny oksizena oksizenina dia mitovy amin'ny halavan'ny fatorana.
Sary 02: Resonance ny Molecule Trioxide Sulfur
Ity fitaovana ity dia manan-danja ho toy ny reagent amin'ny fanehoan-kevitra sulfonation. Ireto fanehoan-kevitra ireto dia zava-dehibe amin'ny famokarana detergents, loko, ary fitambarana fanafody.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Sulfite sy Sulfur Trioxide?
Ny teny hoe sulfites dia manondro ireo fitambaran'ny ionic izay misy anion solifita mifamatotra amin'ny kation isan-karazany. Sulphur trioxide dia fitambarana tsy miharo fananana izay manana formule simika SO3. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny trioxide solifara sy solifara dia ny solifara dia fitambaran'ny iôna manana zezika sulfate (IV), fa ny solifara solifida kosa dia singa tsy ionic.
Ity infographic etsy ambany ity dia mitanisa ny fahasamihafana misy eo amin'ny sulfite sy ny solifara sulfida amin'ny endrika tabilaoro raha ampitahaina.
Famintinana - Sulfite vs Sulfur Trioxide
Ny teny hoe sulfite dia manondro ireo fitambaran'ny iôlônika misy anion-kazo sulfite mifatotra amin'ny kôndasiôna samihafa. Sulfur trioxide dia fitambarana tsy miharo fananana manana ny formula simika SO3. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny trioxide solifara sy solifara dia ny solifara dia singa ionic manana ny iion sulfate (IV), fa ny solifida solifida kosa dia singa tsy ionic.
1. " Sulfur Trioxide ." Ivotoeram-pirenena ho an'ny fampahalalana momba ny biotechnology. PubChem Compound Database , Tranombokim-pirenena amerikana momba ny fitsaboana.
1. “ Sulfite-ion-2D-refes ” (Public Domain) via Commons Wikimedia
2. “ SO3 meso ” Nosoratan'i Yikrazuul - Asa manokana (Public Domain) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny takelaka volamena sy volamena Fahasamihafana eo amin'ny baking soda sy nyoda fanasana Fahasamihafana eo amin'ny amorphous sy ny kristaly matevina Fahasamihafana eo amin'ny aliminioma sy alimina Fahasamihafana eo amin'ny Oxygen sy ny Ozone
Fahasamihafana eo amin'ny Avaratra Marina sy ny Magnetika Avaratra
Fahasamihafana eo amin'i Napkin sy Serviette
Fahasamihafana eo amin'ny Samsung Profile SCH-r580 sy Blackberry Torch 9800
Fahasamihafana eo amin'ny Tasmanian Devil sy Wolverine
Fahasamihafana eo amin'ny homamiadan'ny sela kely sy ny sela kely